HOME » पशु लोकतन्त्र जिन्दाबाद!
पशुपती नाथको पछाडि स्लेस्मान्तक पशुवनमा मनमा आएका कुरा गर्न पशु लोकतन्त्रको बिषयक गोष्ठियाँ सम्पूर्ण पशुहरु पराधिन अधिनका साथ पधारिए ।
वाघले भन्यो - हामी वाघ,भालु,बाँदर, स्याल, ब्वाँसो, हरिण, चित्तल,बनगाइ,बनभैँसी, हात्ती, जङली बँदेल,खरायो, जङली बाख्रा, दुम्सी, जंगल,ठुला ठुला रुख लहरा, पहरा छहरा, सबै हाम्रा लोकतन्त्रका संवाहक हुन् । त्यहाँ भित्र, किरा फटयाङ्रा, चरा, चुरुंगी, साँप, गोवन, धामिन, अजिंगर, झारपात पनि छ्न् । आज हाम्रो एेतिहासिक भेला हो । भेलामा लोकतन्त्रको भेला बिषयक पशुलोकतन्त्र को गोष्ठी भइरहेको छ । त्यसैले सबै पशुहरुले एकै स्वरमा भने- पशुलोकतन्त्र जिन्दाबाद! जिन्दाबाद!! जिन्दाबाद!!!
बाघले थप्यो- हामी लोकतन्त्रका सेनानी हौं । हामीले जंगलमा लोकतन्त्र ल्याउन ठुलो बलिदान दिएका छौं । हाम्रा बाले झन ठुलो बलीदान दिए । हाम्रो हजुरोबाउको त कुरै नगर ।
लोकतन्त्रका सेनानी, लोकतन्त्रका नायक,लोकतन्त्रका लिडर, लोकतन्त्रका बाहक भनेकै बलिया बाँगा हुन्छन् । नाँगा भनेका त रुख हुन्, जंगल हुन् जुन जनता जनार्जन जस्ता हुन्छन् । अनि ती जङलका अगाडि जंगलराजका कानून हामीले लागु गर्दा पनि मौन हुन्छन् । लोकतन्त्रमा मौन हुनु भनेकै समझदार हुनु हो । समझदार हुनु भनेकै लोकतन्त्र हो । जङलकै अगाडि हामीले आफ्ना आहारा जङलकै सहारा लिने प्राणिलार्इ गर्दा पनि ति जङलहरु चुप लागेर आफ्नै स्थानमा उभीइरहन्छन् । कहिले काँही हावाको झोक्कामा प्वाक्कहल्लिए पनि हाम्रो सहमतमा या लोकतन्त्रको सहमतमा मुन्टो हल्लाउछ र यता पात्रले सत्ता धर्मको ताली पडकाउछन् ।
बीचमा भालुले थप्यो- यहाँ को फुस फुसाइ रहेको छ रु यहाँ कसले कानमाँ खास खुस गरिरहेको छ रु यस्तो भयो भने लोकतन्त्रको खिल्ली उँडाएको जस्तो हुन्छ । हामी यो हुन कदापी दिन्नौ । हाम्रो धर्म भनेकै लोकतन्त्रलाई जोगाइ राख्नुहो । बलिष्ट यानेकी बलिया बाँगा जनावरहरुले लोकतन्त्रलाई जोगाउनका लागि जुन सुकै हदमा पनि उत्रन सक्छौं । हाम्रो विरोध गर्ने होइन नि मैले राम्रो सँग भ्निदिएको छु फेरी ।
भालुले पुरै भाषाण गर्न नपाउँदै जङली बंदेलले भन्यो- हामीले जती खोस्रिए पनि पृथ्वी आमाले शान्त र धैर्य भएर लडी रहन्छिन् । हामील जंगलमा रुख, पात, लहरा पहरामा जती ठोक्किए पनि, दलिए पनि लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यतामा धौर्य भएर बसेका छन् । त्यसरी शान्ता र धैर्य भएर वस्नु भनेको लोकतन्त्रलाई शिरोधार्य गर्नु हो ।
जंगली बँदेलको भाषाण पुरा हुन नपाउँदै जंगली हात्तीले सुँड तेर्साउँदै भन्यो- जसरी हामीले जंगलमा जंगली राज चलाऊन्छौ,त्यसरी यो जंगली राजलाई लोकतन्त्र हो भने तिमी साना साना जनावरहरु पशु पंक्षी,चराचुरुङी, लहरा पहरा , छहरा, डाँडाकाँडा र जंगलहरु फाडदै र माडदै हिडयौ भने पनि यो लोकतन्त्रको सक्कली रुप हो भन्ने ठान्नु । हामी शक्त्तिशाली जनावरहरुले,घाँस पात, लहरा, पहरा, छहरामा उत्पादन हुने चिजबिजहरु खाँदै हिडयौ भने पनि यो लोकतन्त्रकै नियम भित्रको रित हो भन्ने ठान्नु । किनभने लोकतन्त्र भनेकै ठुला ठुला तथा शक्त्तिशाली जनवरहरुको दाईजो हो । उनिहरुले तिमीहरु जस्ता निरिह जनावरहरु तथा पशुपक्षिलाई दिएको वक्सिसनै लोकतन्त्रको प्रशाद मान्नु जसरी मानव जातिमा पनि राजा महाराजाले दिएर मात्रै लोकतन्त्र रैतीले पाउने हुन् । यहाँ पनि हामीले दिएर तिमी निरिह प्राणिले पाउने हौ । तिमीहरु निरिह प्राणीको कामै हाम्रो जय जय कार गर्ने हो । ताली बजाउने र हाम्रो डिनर, ब्रेकफास्ट, लञ्चकोजिम्मा तिम्रा जीवन उत्सर्ग गर्ने हो । त्यसका लागि हाम्रा लोकतन्त्रका वाहकहरु वाघ, चितुवा, स्याल, व्वाँसाहरु, अजिंगिर लगायतका किसिम किसिमका जनवरहरु जंगली राज गर्ने पशुलोकतन्त्रका संवाहक छन् । यो कुरोलाई तिमीहरुले कहिल्यै भुल्नु हुन्न ।
यसरी हात्तीले बोल्दै गर्दा स्यालले चिच्याएर भन्यो- हाम्रो जंगली लोकतन्त्रमा पशुलोकतन्त्र भन्ने नामा नै मायाको छ । यहाँ दिन दहाडै साना तथा पशुहरुले प्रतिकृया गर्दैनन । रुख लहराहरु आँफ्नै तालमा नाचिरहन्छन । चरा चुरुंगिहरुआँफ्नै भाकामा गाइरहन्छन् । छहरा पहराहरु तथा ढुङ्गा मुडाहरु आँफ्नै स्थानमा अडिरहन्छन् । तवन हाम्रो लोकतन्त्रले एउटा एेतिहांसिक समयको काल खण्डमा पनि अडिग भएर उभीरहेकोछ । त्यसैले जसरी मानव जातिका ठुला ठुलाअफिसरका गाडी मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापती , प्रधानन्यायधिसका गाडी शहरमा लोकतन्त्रको आभाष बुझ्न मन्त्रालय तथा सरकारी अफिसर लोकतन्त्रको पोको बोकेर कामा फत्ते गर्न दगुरछन त्यसरी नै हाम्रा बाघराजा, हात्तीराजा, व्वाँसा, भालु अजिंगरहरुले पनि निर्धक्क सँग लोकतन्त्रको स्थाइत्वकोलागी जंगलमा मंगल गर्न सवार भइरहनु पर्छ ।
स्यालले बोल्दै गर्दा चितुवाले उसलाई चुप लाग्न इशारा गर्यो र आँफै बोल्न थाल्यो र भन्यो- हामी पशुको माझमा पशु लोकतन्त्रले एउटा एेतिहासिक कालखण्ड पार गरेर तपाईं हाम्रो माँझ नमात्तिने गरी हाम्रोमन जितिरहेको छ । जसरी मानव समुदायले पनि जनतालाई घरघराँ, टिवि, रेडियो साइकल, मोटर साइकल, तथा विभिन्न भुलाउने कार्यक्रम तथा जुवा तास रक्सी र रक्सीका भट्टि खोल्ने छुट दिएर हाम्रो रुख र जंगललेआकाश हेर्दै हावाको झोक्काँ प्वाक्क लाटो भएर तेर्सिएको झै मानव लोकतन्त्रले पनि सवैलाई मस्त बनाइ मनोरञ्जना ध्यानाकर्षण गरेर एक एक गरी ठुला तथा शक्त्तिशाली महाशयले घुमाइरहेकै छन् । यो त संसारको लोकतन्त्रको नियम हो । त्यसैले सबैले एकै स्वरमा भन- पशु लोकतन्त्र जिन्दावाद! सबैले एकै स्वरमा भने- पशु लोकतन्त्र जीन्दावाद! जीन्दावाद!! जीन्दावाद!!!